टेस्ट क्रिकेटः श्रीलंकालाई ५७ रनले पराजित गर्दै इङ्ल्यान्ड विजयी::न्युज बिहानी
बाहिर होटल, भित्र यौन धन्दा, एक दर्जन युवायुवती रंगेहात प्रहरी नियन्त्रणमा
भारतमा भएको आतंकवादी हमला पछि मोदी को यैलाने-जंग
नर्सले कण्डम नाकले फुकेको भिडियो सामाजिक सञ्जालमा भाइरल (भिडियोसहित)
महाअभियोगको तयारी हुँदै गर्दा अख्तियार आयुक्त पाठकले दिए राजीनामा
आतंकवादीले उडायो पुलिस चढेको गाडी, ४० सुरक्षाकर्मी ठहरै, प्रधानमन्त्रीद्वारा दुःख व्यक्त
एक वर्षमा ओली सरकारबाट जनता पुरै निराश भएः नेता महत
प्रतिव्यक्ति आय रु १० हजार डलर पुर्याउन आर्थिक वृद्धिदर दुई अङ्कमा बढ्नुपर्छः पूर्वप्रम भट्टराई
जुवाको खालबाट ९ लाख रकमसहित २३ जुवाडे पक्राउ
अख्तियारका आयुक्त पाठकविरुद्ध महाअभियोग लगाउने तयारी
यो वर्ष पनि नआउने भयो मेलम्ची खानेपानी
१८ किलो सुन प्रहरी जवानको ससुरालीबाट बरामद
काठमाडौँमै नेकपा निकटका विद्यार्थी र प्रहरीबीच झडप, अधिकांसकाे फुट्याे टाउँकाे
संसदमै ओलीको बकमफुसे उखान टुक्कामाथि सांसद देवकोटाले दिइन् यस्तो दनक
कञ्चनपुरमा भेटियाे झन्डै एक अर्बको सुन, प्रहरीले लियाे यस्ताे एक्सन!
सरकारले सवै अधिकारहरु केन्द्रमा थोपरेर राख्नु हुँदैनः नेता पौडेल
प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमः विज्ञहरु भन्छन् ‘लक्ष्यमै सिमित हुन्छ’
क–कसले पाउँछन् बेरोजगार भत्ता ? पाउने प्रक्रिया के ?
ओली सरकारको १ बर्षः आज प्रधानमन्त्री ओलीले देशवासीको नाममा सम्बोधन गर्ने
अपनाउनुस ६ ट्रिक्स, जसले युवतीलाई आकर्षित गर्न सकिनेछ
अस्ट्रेलियामा सयौं नेपाली विद्यार्थी अन्यौंलमा, नेपाली एजेन्ट नैतिक जिम्मेवार
सांसरले तिखो आँखाले हेर्नुपर्ने र कान खोलेर सुन्नुपर्ने काम गरेका छौं: अध्यक्ष दाहाल
‘प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम’ घोषणामा ओलीले सुनाए बोक्सीको कथा !
प्रदेश २ मा के छ ? जसले चिनियाँ पर्यटक तान्न सक्छ
टेस्ट क्रिकेटः श्रीलंकालाई ५७ रनले पराजित गर्दै इङ्ल्यान्ड विजयी
क्यान्डी । श्रीलंकाको क्यान्डीमा भएको दोस्रो टेस्ट क्रिकेटमा इङ्ल्यान्डका बलर ज्याक लिचले पाँच विकेट लिएपछि श्रीलंका ५७ रनले पराजित भएको छ । तीन खेलको यस शृङ्खलामा इङ्ल्यान्डको यो लगातार दोस्रो विजय हो ।
पाँचौं दिन ३० मिनेटभित्रै इङ्ल्यान्डले श्रीलंकाका तीन विकेट लिएर खेल जितेको थियो । सन् २०१५–१६ मा अफ्रिकालाई पराजित गरेयता विदेशी भूमिमा इङ्ल्यान्डको यो पहिलो शृङ्खला विजय हो । श्रीलङ्कालाई यसअघि सन् २००१ मा इङ्ल्यान्डले श्रीलंकामै आएर शृङ्खला जितेको थियो ।
श्रीलंकालाई जितका लागि ३०१ रन आवश्यक थियो, तर श्रीलंकाले २४३ रन मात्र बनाउन सकेको थियो ।
यसअघि गाल्लेमा भएको पहिलो टेस्ट पनि इङ्ल्यान्डले जितेको थियो । दोस्रो टेस्टमा ज्याक लिच, मोइन अलि र अदिल रसिदले १९ विकेट लिएका थिए । साथै, इङ्ल्यान्डका कप्तान जो रुटले दोस्रो इनिङमा १२४ रनको महत्वपूर्ण पाली खेलेका थिए ।
जितपछि बोल्दै कप्तान रुटले निकै सङ्घर्षपूर्ण जीत प्राप्त गरेकामा टोलीका सबै खेलाडी प्रसन्न रहेको बताए । तेस्रो टेस्ट कोलम्बोमा शुक्रबार शुरु हुँदैछ ।
क्रिकेट टोलीलाई प्रतिव्यक्ति ५ लाख दिने सरकारको निर्णय
ऐतिहासिक जित हासिल गरेको नेपाली क्रिकेट टोली आज स्वदेश फर्कदै
पहिलो ओ डिआई पछि नेपालले जित्यो पहिलो टी-२० क्रिकेट सिरिज
झापाको बिर्तामोड आसपासको क्षेत्रमा सञ्चालित होटल तथा लजमा
मोदीले भने कि उनी देशलाई विश्वास दिन चाहानुहुन्छ
काठमाडौं । अहिले सामाजिक सञ्जालको जति उपयोग भएको
काठमाडौं । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका आयुक्त राजनारायण
काठमाडौं । छिमेकी राष्ट्र भारतको जम्मु–कास्मिरमा भएको आतंकवादी